Shiinaha Customized Lathe-saareyaasha-saareyaasha, Warshad - Dongguan Guancheng qirayso Hardware Co., Ltd.
Ka shaqeynta Lathe
Hoyga > Ka shaqeynta Lathe Ka shaqeynta Lathe > Goynta mashiinka Lathe
Qalabka aluminium ee aluminium ee CNC
Kuleylka kuleylka kuleylka leh
Qalabka kuleylka ee Aluminium
Module hiitarka kuleylka
Goynta mashiinka Lathe
Maalgashiga lathe CNC wuu ka hooseeyaa kan lathe CNC, laakiin wuxuu ubaahan yahay xirfado hawlgal oo sare oo shaqaalaha ah, sidaa darteed heerka mushaharku wuu sarreeyaa.
1. Faa'iidooyinka ay leedahay lathe CNC adoo tallaabada gudbinta mootada dariiqa mootada ku xirxiraya, maxaa yeelay furitaanka kubbadu wuxuu yeelan karaa faragelin, gudbinta bilaa nadiifin, saxsanaanta waxaa badiyaa damaanad qaada mashiinka mashiinka laftiisa iyo barnaamijka. In geeddi-socodka howsha si otomaatig ah loo cabbiri karo, isla markaana si otomaatig ah u magdhabi karo qalabka duugga ah iyo sababaha kale ee qaladka. Markaa tayada wax-soo-saarku way wanaagsan tahay, saxsanaantu way deggan tahay.
2. Tilmaamo ayaa loo qorsheyn karaa inay soo baxaan qaabab isku dhafan, lathe-ka caadiga ah way adag tahay in laga shaqeeyo qaybaha. Ku habboon saxnaanta sare, dufcad ballaaran, qaybo qaab adag. Laakiin sidoo kale waxay si fiican ugu shaqeysaa qaybo yaryar. Dayactirka ayaa ka qaalisan kan lathe caadi ah.
3. tilmaamyada latheerka caadiga ah ee qalabka wax lagu duubo iyo qashinka caadiga ah. Sababtoo ah waxaa jira farqi u dhexeeya labada lamaane ee dhaqdhaqaaqa, oo ay weheliso hawlgalka gacanta ma aha mid sax ah, markaa saxsanaanta ku celcelintu way hooseysaa. Qiyaasta lathe guud waxay u baahan tahay in la joojiyo cabirka gacanta ka dib, qaladka cabirku waa weyn yahay, iyo waxtar yar. Ku habboon dufcad yar, shuruudaha saxda ah ma ahan kuwo sarreeya, qaybo dayactir ah. Maalgashiga lathe CNC wuu ka hooseeyaa kan lathe CNC, laakiin wuxuu ubaahan yahay xirfado hawlgal oo sare oo shaqaalaha ah, sidaa darteed heerka mushaharku wuu sarreeyaa. Qiyaasta duugga ah iyo wax soosaarka shaqaale heer hoose ah ayaa ku siin kara madax xanuun.
Calaamadaha kulul: Goynta mashiinka Lathe, Shiinaha, Gawaarida, Soo-saareyaasha, Warshad
Taper u rogida mashiinka lathe
Gawaarida Degdega ah
No. 2, Xinyuan South Wadada 4aad, Guddiga Tuulada Ludong, Humen Town, Dongguan City